jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt समीक्षा
jsoup जावा रिपोजिटरी हो जुन HTML कार्यान्वयन गर्दछ। यो एक कुशल र प्रभावी एपीआईको साथ सुसज्जित छ जुन आवश्यक DOM, CSS, र jquery- जस्तो विधिहरूको प्रयोग गरेर डेटा स col्कलन, विश्लेषण र प्रबन्ध गर्दछ।
Jsoup प्रोग्रामर र वेब डिजाइनरहरूको साथ स्रोत फाईलहरूको संरचनालाई विख्यात नगरीकन वेब स्रोत फाइलहरूबाट कागजातहरू विकास गर्न सक्दछन्। फाईलहरू पुन: प्राप्त गर्दा, jsoup प्रयोगकर्ताहरू पूरै संरचना तत्वहरू वा तत्व तत्वहरू एडिमेन्टहरू वा सामग्री वा दुबै परिमार्जन गरेर पुन: कन्फिगर गर्न वा पुन: डिजाइन गर्न सक्दछन्।
उपकरण वेब वातावरण र अनुप्रयोगहरूको एक विस्तृत विविधता भित्र एक लचिलो र मानक प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस प्रदान गर्न व्यापक चपलताका साथ निर्मित छ। यसले प्रयोगकर्तालाई परिवर्तन, मेट्न, वा घटकहरू तिनीहरूको व्युत्पन्नमा थप गर्न आवश्यक पहुँच दिन्छ।
jsoup अन्य ढाँचामा सजिलो अनुवाद को लागी सानो घटक मा डाटा डिकोड र विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। इनपुट डाटालाई एल्गोरिथमिक प्रगतिको रूपमा खनन गरिन्छ जुन स or्कलन वा व्युत्पन्न रूखमा निर्मित निर्देशनहरूको कोडबाट बनेको हुन्छ। यो HTML कम्पोनेन्टहरू बुझ्ने र एकीकृत गर्न यस्तो बनाइएको हो कि यसले कोडिंग संरचनामा निर्भर भएर यस्तो लचकताका साथ फाइल घटकहरू पुनःप्राप्त गर्न सक्दछ। यो कसरी गर्छ? पहुँच र डेटा क्याप्चर गर्नको लागि पैटर्नको लागि यसले सम्पूर्ण वेब पृष्ठ क्रल गर्दछ र स्क्र्याप गर्दछ। यदि डाटा व्युत्पन्न सम्भव छ भने, यो अगाडि बढ्नेछ:
प्रत्येक एक डाटा कम्पोनेन्ट विचार गर्दै कन्फिगरेसन संरचनाबाट यसको उच्चतम स्तरबाट पार्स रूखको नेभिगेट र विश्लेषण गर्दछ। यस दृष्टिकोणलाई शीर्ष-डाउन पार्सि method विधि भनिन्छ।
संरचनाको तल्लो तहबाट डेटा स्क्र्याप गर्दै , प्रत्येक डाटा कम्पोनेन्टको विश्लेषण गर्दछ, मध्यवर्ती रचनाहरूको माध्यमबाट पार्स वा व्युत्पन्न रूखको शीर्षमा।
jsoup एक प्रभावकारी समाधान हो जुन स्प्लिट सेकेन्डमा जटिल अपरेशनको गुणाइबाट गुज्रन्छ किनभने यसको काट्ने किनारको डिजाइनको कारण। प्रक्रियामा सामान्यतया तीन आधारभूत चरणहरूको उत्तराधिकार हुन्छ:
१. सानो सरल प्याकेटमा झिकिएका क्यारेक्टरहरू र डाटाको विखंडन, र सिर्जना गर्न चरित्र र डाटाको यी बिटहरूको विश्लेषण।
२. एक व्याख्या जुन मेशिन भाषाले पढ्न र कम्पाइल गर्न सक्दछ जुन डाटा क्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्षम छ र उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Elect. इलेक्ट्रोनिक अभिव्यक्तिहरू जुन सूचनाको टुक्राहरू गठन गर्दछ जुन आवश्यक कन्फिगरेसन, मान र प्रयोगकर्तासँग प्रासंगिकताको हो।
jsoup संग उपयुक्त छ र HTML स्क्रिप्टको एक विशाल संरचना, भाषा इन्टरफेस, प्रोग्रामहरू र कागजात शैली WHWG HTML5 आवश्यकताहरू सहित कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ। वर्ल्ड वाइड वेबमा डाटा र सूचना संसाधनहरू निकाल्न, नेभिगेट गर्न र प्रस्तुत गर्नका लागि प्रयोग गरिएको वेब सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरूको रूपमा उस्तै कागजात वस्तु मोडेलमा उनीहरूले एचटिएमएल संरचनाहरू समाधान गर्न समान रूपले सक्षम छन्।
jsoup सँग क्षमता छ:
स्क्र्याप र पार्स HTML URL, फाईल, वा स्ट्रि fromबाट
DOM traversal वा CSS चयनकर्ताहरूको प्रयोग गरेर डाटा पत्ता लगाउनुहोस् र निकाल्नुहोस्
HTML तत्व, विशेषता, र पाठ बढाउनुहोस्
XSS आक्रमणहरू रोक्नको लागि, सुरक्षित सेतो-सूची विरुद्ध प्रयोगकर्ता-बुझाइएको सामग्री मेटाउनुहोस्
एक सुव्यवस्थित HTML वितरण गर्नुहोस्
सफ्टवेयर कन्फिगरेसनको बाबजुद सबै प्रकारका HTML समाधान गर्न निर्माण गरिएको छ: प्राचिन र मान्यकरणबाट, अवैध ट्याग-सूपसम्म: jsoup ले इच्छित पार्स संरचना सिर्जना गर्दछ।